के तपाईंको हातमा पनि यी ४ चिन्ह छन् ? जान्नुहोस् तपाईं कति भाग्यमानी ! – Ramailo Sandesh
हस्तरेखा शास्त्रका अनुसार हातको रेखाले व्यक्तिको जीवनमा आउने उतार-चढावको बारेमा बताउँछ। त्यस्तै, हातको शुभ संकेतहरूले व्यक्तिको जीवनमा सुख, धन, धन आदिको योगको बारेमा थाहा हुन्छ। हस्त रेखामा स्वास्तिक, शंख, चक्र, कमल जस्ता संकेतको महत्त्व जान्नुहोस्।
हिन्दू धर्ममा शंखलाई धेरै पवित्र मानिन्छ। शंख धेरै देवीदेवताहरूको हातमा पनि देखिन्छ, तर मुख्यतया यो भगवान विष्णुको हो। शंख विजयको प्रतीक हो। हातमा शंखको प्रतीक भएको व्यक्ति जीवनमा कहिल्यै विफल हुँदैन। हातमा शंखको चिन्ह भएको मानिसको शत्रुले पनि केहि बिगार्न सक्दैन।
चक्र भगवान विष्णुसँग सम्बन्धित प्रमुख चिन्ह हो। यो प्रतीक धेरै भाग्यशाली व्यक्तिहरूको हातमा फेला पर्छ। यो प्रतीक लाखौं मध्ये कुनै एकको हातमा मात्र फेला पर्छ। जसको हातमा चक्रको प्रतीक हुन्छ उक्त मानिस अतुलनीय सम्पतिको मालिक बन्छ। उक्त व्यक्तिले समाजमा निकै मान-सम्मान पाउँछ।
स्वस्तिकको प्रतीकलाई हिन्दू धर्मको एकदम पवित्र प्रतीक मानिन्छ। पूजा गर्नु अघि स्वस्तिकको प्रतीक बनाउने विशेष परम्परा छ। हातमा स्वस्तिकको प्रतीक हुने व्यक्तिले सधैं राम्रो कार्य गर्छ र धर्मको पालना गर्छ। यस्ता व्यक्तिले ठूलै आदर र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्छन्।
कमलको प्रतीक माता लक्ष्मीसँग सम्बन्धित छ। जसको हातमा कमलको प्रतीक हुन्छ उक्त व्यक्ति एकाधिकार राज्यको मालिक हुन्छ। यस्ता व्यक्ति ठूलो उद्योगपति बन्न सक्छन्। यस्ता मानिस अहंकारी पनि हुनसक्छन्।